TAMAANDHADA "RED TRUFFLE": SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN, SAWIRKA YAANYADA - BEER CAGAARAN
A noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah ee yaanyada for greenhouses iyo dhulka u furan - "Truffle Red"
Beeraley kasta oo doonaya inuu soo saaro noocyo kala duwan oo ku saabsan sawirka, kaas oo siin doona dalag deggan oo leh difaac wanaagsan. Waxaan kugula talinaynaa inaad fiiriso yaanyo xiiso leh, oo loo yaqaan "Red Truffle". Waxa uu si wanaagsan u abuuray beeraleyda iyo foosha, waxaadna ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan maqaalkeenna.
Akhri faahfaahinta buuxda ee noocyada kala duwan, si aad u ogaatid sifooyinka ugu muhiimsan iyo waxyaabaha gaarka ah ee beerashada.
Tamaandhada cas: casriga kala duwan
Magaca dugsiga Truffle Red
Codsiga Fresh, ee ilaalinta
Noocyo dhaadheer 12-16 kg mitir labajibbaaran
Cadaadiska cudurada U baahan tahay fomoz ka hortag
Tamaandho kala duwan oo kala duwan - natiijada ka soo baxday shaqsiyaadka saynisyahanka Ruushka. Diiwaangelinta noocyada kala duwan ee beerista ee dhulka iyo beeraha lagu beeray 2002. Tan iyo markaas, waxay caan ku ahayd beeralayda iyo beeraleyda sababtoo ah sifooyinka noocyada kala duwan. "Truffle Red" waa nooc aan kala go 'lahayn, baadiyaha caadiga ah. Waxay ka tirsan tahay noocyada dhexe ee Bisaylkiisa, 100-110 maalmood waxay ka gudbaan transplanting si ay u daaqaan miraha ugu horreeya.
Waxay leedahay iska caabin wanaagsan oo cudurro waaweyn ah, waxay sidoo kale ka hortagi kartaa cayayaanka halista ah. Kala duwan Tani waxaa lagu talinayaa beerista labadaba beer furan iyo hoyga aqalka dhirta lagu koriyo. Noocyada noocan ahi waxay leeyihiin wax wanaagsan. Iyada oo ku haboon daryeelka iyo xaaladaha ugu fiicnaanta, waxaad heli kartaa ilaa 6-8 kg oo miraha aad u fiican laga bilaabo hal baadiyaha. Marka la beerto qorshe 2 baadiyaha ah labajibbaaran. m ayaa tagaya 12-16 kg.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka shaki ka mid ah tamaandhadan soo socda:
caabbinta cudurrada iyo cayayaanka waxyeellada leh;
Dhibaatooyinka la xusay:
awood-siinta qaabka waraabka;
laanta daciifta waxay u baahan tahay garters qasab ah;
shuruudaha loogu talagalay Bacriminta.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee yaanyo "Red Truffle" waa qaabka midhihiisa. Mid kale oo ka mid ah sifooyinka ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay iska caabin adag xagga kuleylka.
Truffle Red 12-16 kg mitir labajibbaaran
Qaraha 4.6-8 kg halkii mitir labajibbaaran
Qalabaynta Japaneseka 5-7 kg ka baadiyaha
Sugar Cake 6-12 kg ka baadiyaha
Kubad cas 17 kg mitir labajibbaaran
Spasskaya Tower 30 kg halkii mitir labajibbaaran
Cagaarka Banana 4.5-5 kg ​​ka baadiyaha
Qorrax-dhaca qorraxda 14-18 kg ka baadiyaha
Ka dib markii midhaha si buuxda u bislaaday, waxay leeyihiin midab cas oo dhalaalaya.
Tamaandho ma aha mid aad u ballaaran waxayna mararka qaar gaari karaan miisaan 200 gram ah, laakiin marar badan 120-150 garaam.
Qaab ahaan, waxay yihiin pear-qaabeeya.
Qodobka qallalan ee qallalan waa qiyaastii 6%.
Tirada kamaradaha 5-6.
Miraha go'ay ayaa la keydin karaa waqti dheer iyo si fiican u bislaadaan, haddii ay soo ururiyaan wax yar oo cagaaran.
Mirahaasi waxay qurux badan yihiin dhadhanka, waxay aad u fiican yihiin isticmaalka cusub. Waxa kale oo loo isticmaali karaa ilaalinta, waxay ku habboon yihiin tan, sababtoo ah baaxaddiisa. Wixii soo saarista casiirka iyo caleenta way ku dhow yihiin marnaba, maadama qashirku cufan yahay sababtoo ah maaddooyinka sare ee walxaha qalalan.
Truffle Red 120-200 garaam
Sawiro dhowr ah oo midhaha yaanyo ah "Red Truffle":
"Red Truffle" waxaa loola jeedaa ururinta kala duwan ee Siberian sidaas darteed waxaa si guul leh loogu kori karaa dhul furan oo aan ahayn koonfurta, laakiin sidoo kale gobollada dhexe ee Ruushka. Laakiin weli, si looga fogaado khatarta luminta khasaaraha, waxaa fiican in laga koro hoos cover filimka. Meelaha waqooyiga waxaa lagu koray oo kaliya lagu koriyo.
Bannaanka waa in la sameeyaa 2 caws. Red Truffle ayaa si fiican uga jawaab celiya waxtarrada ay ku jirto fosfooraska iyo potassium. Laamaha kala duwan ee noocaan badanaa waxay u jajabaan sababtoo ah darnaanta midhaha, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in la xiro.
On our site waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo waxtar leh oo ku saabsan yaanyada sii kordhaya. Akhri dhammaan wixii ku saabsan noocyada aan caddaalad ahayn iyo kuwa la go'aamiyo.
Iyo sidoo kale ku saabsan xiisaha daryeelka ee noocyada hore ee Bisaylkiisa iyo noocyo lagu gartaa dhalidda sare iyo caabbinta cudurada.
"Red Truffle", inkastoo ay u adkaysato cudurada ugu muhiimsan, weli waxaa saameyn kara fomoz. Si aad uga takhalusto cudurkan waa in laga saaro midhaha ay saameeyeen. Laan galka warshadda si loo soo saaro daroogada "Hom" iyo yaree tirada qiyaasaha Bacriminta nitrogen, iyo sidoo kale yaraynta waraabinta, naaqusida aqalka dhirta lagu koriyo, haddii dhirta ay tahay hoy. Meel qallalan waa cudur kale oo saameyn kara noocyada kala duwan. Daawooyinka "Antracol", "Consento" iyo "Tattu" ayaa loo isticmaalaa.
Goobta furan, gaar ahaan koonfurta, yaanyada badanaa waxay ku dhacaan caarada caarada. Ka soo horjeeda iyaga oo isticmaala daroogada "Bison". Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, dhirtani waxay saameyn kartaa aphids iyo walxaha, waxay u isticmaalaan daroogada "Qaadka" iyaga ka soo horjeeda. Iyo sidoo kale noocyo badan oo kale oo yaanyo ah ayaa loo soo bandhigi karaa cagaarka cagaaran, waxay la halgamayaan iyaga oo isticmaalaya daroogada "Confidor".
Kala duwan yaanyo "Red Truffle", inkastoo ay adag tahay in la daryeelo, laakiin waxay u baahan tahay taxadar joogto ah nidaamka biyo waraabinta iyo bacarimiso. Isagu waa kan mid sharciga falaa, wuuna kuu macnayn doonaa. Nasiib wacan!
Waxaad arki kartaa noocyo kale oo leh shuruudaha kala duwan ee miisaanka: